Ahoana ny fomba hanary fako?
Fananganana fako biolojika ilaina ary tsy azo ihodivirana rehefa manao zezika ao an-trano ny ankohonana. Ny fako fanaovana zezika dia fomba iray mahomby sy ara-toekarena ihany koa amin'ny fitantanana ny fako. Misy karazany 2 ny fomba fanaovana zezika azo amin'ny zezika zezika voajanahary vita an-trano.
Ny mari-pana amin'ny zezika ankapobeny dia latsaky ny 50 ℃, manana fotoana fananganana zezika lava kokoa, matetika 3-5 volana.
Misy karazany 3 ny fametahana azy: karazana fisaka, karazana antsasaky ny lavaka ary karazana loaka.
Karazana fisaka: mety amin'ny faritra misy hafanana be, orana betsaka, hamandoana avo ary haavon'ny rano ambanin'ny tany. Misafidy tany maina sy malalaka manakaiky ny loharano misy rano & mora entina. Ny sakan'ny stack dia 2m, ny haavony dia 1.5-2m, ny halavany mitantana amin'ny habetsaky ny akora. Mamono ny tany alohan'ny hametrahana sy handrakofana ny sosona akora tsirairay miaraka amina ahitra na ahitra mba hisitrihana ranom-boasary. Ny hatevin'ny sosona tsirairay dia 15-24cm. Manampy betsaka ny rano, sokay, fotaka, tany alina sns eo anelanelan'ny sosona tsirairay mba hampihenana ny etona sy ny volatilization amoniaka. Ny mpamily mpamily compost mandehandeha (iray amin'ireo milina fanaovana zezika lehibe indrindra) hamily ny stack rehefa afaka iray volana, sns., Mandra-pahafatiny ho faty. Manampy rano mety mifanaraka amin'ny fahamandoana na fahamainana amin'ny tany. Miovaova arakaraka ny vanim-potoana ny tahan'ny fanaovana zezika, matetika 2 volana amin'ny fahavaratra, 3-4 volana amin'ny ririnina.
Karazana semi-pit: matetika ampiasaina amin'ny fiandohan'ny lohataona sy ririnina. Misafidy toerana mafana sy lee handavaka lavaka manana halalin'ny 2-3 metatra, 5-6 metatra ny sakany, ary 8-12 metatra ny halavany. Eo amin'ny farany ambany sy amin'ny rindrin'ny lavaka dia tokony misy lalan-drivotra naorina miendrika lakroa. Ny tampon'ny zezika dia tokony hasiana tombo-kase tsara amin'ny tany aorian'ny famoahana trondro maina 100. Hiakatra ny maripana aorian'ny composting iray herinandro. Mampiasà tuner compost karazana haitao hanodinana ny antontam-boaloboka aorian'ny fihenan'ny mari-pana mandritra ny 5-7 andro, avy eo mitazona hatrany mandra-pahavoafo ny akora farany.
Karazan-davaka: Halalin'ny 2m. Antsoina hoe karazana ambanin'ny tany koa izy io. Ny fomba stack dia mitovy amin'ny karazana semi-pit. Nandritra ny dingana lo, ampiharana helikôlika compost helix indroa hampiasaina hampiodina ny fitaovana ho an'ny fifandraisana tsara kokoa amin'ny rivotra.
Ny composting thermophilic dia fomba iray lehibe hijerena tsy ara-dalàna ny akora biolojika, indrindra ny fako ataon'ny olombelona. Ireo zavatra manimba, toy ny mikraoba, atody, voan'ahitra sns amin'ny mololo sy fivoahana dia ho ringana aorian'ny fitsaboana ny hafanana avo. Misy karazany 2 ny fomba fanaovana composting, ny karazana fisaka ary ny karazana semi-pit. Ny teknolojia dia mitovy amin'ny composting ankapobeny. Na izany aza, mba hanafainganana ny famotehana ny mololo, ny composting thermophilic dia tokony hampiditra bakteria lo ny fatran'ny hafanana cellulose avo lenta ary hametraka fitaovana fanamoriana. Ny fepetra mangatsiaka-porofo mangatsiaka dia tokony hatao any amin'ny faritra mangatsiaka. Ny zezika mari-pana avo lenta dia mandalo dingana maromaro: Mihena-maripana ny maripana-maripana-maripana. Amin'ny maripana ambony dia potika ireo zavatra manimba.
Raw Fitaovana zezika voajanahary vita an-trano
Manoro hevitra ny mpanjifanay izahay hisafidy ireto karazana manaraka ireto mba ho akora otran'ny zezika voajanahary vita an-trano.
1. Fitaovana mamboly
1.1 ravina latsaka
Any amin'ny tanàn-dehibe maro, ny governemanta dia nandoa ny vola tamin'ny asa mba hanangonana ireo ravina latsaka. Rehefa matotra ny zezika, dia hanome izany na amidy amin'ny mponina amin'ny vidiny ambany. Tsara kokoa ny miakatra ambonin'ny tany mihoatra ny 40 cm raha tsy amin'ny tropikaly. Ny antontam-bato dia mizara ho sosona ravina sy tany mifandimby avy amin'ny tany ka hatrany ambony. Isaky ny sosona ny ravina nianjera dia tsara kokoa noho ny 5-10 cm. Ny elanelam-potoana misy eo anelanelan'ny ravina latsaka sy ny tany dia mila 6 na 12 volana farafahakeliny. Tazomy ny hamandoan'ny tany, fa aza aondraka be loatra hisorohana ny fahaverezan'ny otrikaina amin'ny tany. Mety ho tsara kokoa raha manana dobo fitahirizana simenitra na tile ianao.
Singa lehibe: azota
Fizarana faharoa: phosphore, potasioma, vy
Ampiasaina indrindra amin'ny zezika azota izy io, ny fifantohana ambany ary tsy manimba mora ny fotony izy io. Tsy tokony hampiasa betsaka amin'ny dingana mamoa voankazo izy io. Satria ny felam-boninkazo sy ny voankazo dia mila solifara potasioma fosforoka.
Raha mampiasa ny voankazo, voa, palitao voa, voninkazo sns sns, mety mila fotoana lava kokoa ny fotoana lo. Fa ny atin'ny fôpôly, potasioma ary solifara dia avo lavitra kokoa.
1.3 Mofomamy tsaramaso, tsaramaso sy sns.
Araka ny toe-javatra mihasimba dia mila 3 ka hatramin'ny 6 volana farafahakeliny ny zezika. Ary ny fomba tsara indrindra hanafainganana ny fahamatorana dia ampidirina amin'ny bakteria. Ny fenitry ny zezika dia tsy misy fofona hafakely.
Ny atin'ny solifara potasiôly phosorea dia ambony noho ny zezika fako, saingy ambany noho ny zezika voankazo izy io. Ampiasao ny vokatra soja na tsaramaso mba hanaovana compost mivantana. Satria avo ny votoatin'ny soja, noho izany, mangina lava ny fotoana fitsangantsanganana. Ho an'ny mpankafy mahazatra, raha tsy misy flora sahaza azy dia mbola manana fofona ratsy aorian'ny herintaona na taona maro taty aoriana. Noho izany, manoro hevitra izahay ny, nandrahoina tsara ny soja, nodorana, ary avy eo miverina indray. Noho izany, afaka mampihena be ny fotoana ialan'ny retting io.
2. Excreta biby
Ny fako misy ny biby ahitra, toy ny ondry sy ny omby, dia azo ahodinaina mamokatra zezika bio. Ankoatr'izay, noho ny habetsaky ny phosoreo avo dia safidy tsara koa ny zezika akoho sy tain-voromailala.
Fanamarihana: Raha tantanina sy haverina ampiasaina amin'ny ozinina mahazatra, ny excreta olombelona dia azo ampiasaina ho akora mahazatra an'ny zezika biolojika. Ny ankohonany kosa, tsy fahampian'ny fitaovana fanodinana mandroso, noho izany tsy manolo-kevitra ny hisafidy excreta olombelona ho akora mandritra ny fanaovana zezika anao manokana izahay.
3. Zezika voajanahary / tany mahavelona
☆ fotaka fotaka
Toetra: Be volo, saingy avo lenta. Tokony hampiasaina ho zezika ifotony izy io, tsy mety raha ampiasaina irery.
Toy ny Taxodium distichum, miaraka amin'ny atiny ambany resina, dia ho tsara kokoa.
Mahomby kokoa. Tsy tokony hampiasaina mivantana izany ary azo afangaro amin'ny akora organika hafa.
Ny antony tokony hamongorana tanteraka ny olana biolojika
Ny famafana ny zezika biolojika dia mitarika lafin-javatra roa lehibe amin'ny fanovana ny zezika biolojika amin'ny alàlan'ny hetsika mikraoba: ny fikajiana ireo akora biolojika (ampitomboina ny otrikaina azo avy amin'ny zezika). Etsy ankilany, ny zavatra biolojika amin'ny zezika dia miova avy amin'ny sarotra ka hatramin'ny malefaka, ny fiovan'ny endrika tsy mitovy amin'ny fanamiana. Amin'ny dingan'ny zezika, hamono ny masomboly, mikraoba ary ny ankamaroan'ny atody kankana. Araka izany, mifanaraka kokoa amin'ny filan'ny famokarana fambolena izany.